Raw sodothyronine sodium (T3) vovoka Fambolena sy mpanome - Pabrika
Liothyronine dia endriky ny hormone ny tiroida (T3) ampiasaina amin'ny fitsaboana hypothyroidism sy myxedema koma. Ankoatra izany dia ampiasaina ho tetik'ady fampivoarana amin'ny fitsaboana ny aretin'ny Major Depressive rehefa ampiasaina miaraka amin'ny antidepressants.
Rohin'ny Liothyronine Sodium (T3) voly (55-06-1) video
Roahina Liothyronine Sodium (T3) vovoka (55-06-1) Description
Ny voam-barotra Liothyronine Sodium (T3) dia singa iray amin'ny iray amin'ireo hormones roa natao tamin'ny taolan'ny tiroida, triiodothyronine. Ampiasaina amin'ny fitsaboana ny olona voan'ny hypothyroid (tsy mamokatra hormones ho an'ny tiroida). Ny hormone amin'ny tiroida dia mampitombo ny metabolism (asa) an'ny sela rehetra ao amin'ny vatana. Ao amin'ny foetus, zaza vao teraka sy zaza, hormones ny tiroida dia mampiroborobo sy mampiroborobo ny vatan'ny olona. Ao amin'ny olon-dehibe, ny hormonina amin'ny tiroida dia manampy amin'ny fihazonana ny asan'ny atidoha, ny fampiasana ny sakafo amin'ny vatany, ary ny mari-pana ao amin'ny vatana. Nampiasaina koa izy io mba hitondrana olana hafa amin'ny tiroida (toy ny karazana goaters sasany, kanseran'ny tiroida). Azo ampiasaina koa izany mba hitsapana ny karazana aretina tiroida. Ny FDA dia nankasitraka ny liothyronine tamin'ny volana Mey 1956.
Roahina Liothyronine Sodium (T3) vovoka (55-06-1) Specifications
Product Name Roahina Liothyronine Sodium (T3) vovoka
Anarana simika Ny siramamy 5-Triiodo-L-thyronine, sira sodium (1: 1), 5-diiodo- L-Tyrosine
molekiolan'ny Formula C15H11I3NNaO4
molekiolan'ny Wvalo 672.96
mitsonika Point 205 ° C (dec.) (Lit.)
Ny antsasaky ny biolojia mikasika ny andro 2-1 / 2
Color White ho an'i Pale Brown
Solubility 4 M NH4OH amin'ny metanol: 125 g / 5mL, mazava, mavo-mavo
Application Nampiasaina mba hikarakarana ny tiroida (hypothyroidism)
Inona ny Rohahy Liothyronine Sodium (T3) vovo (55-06-1)?
Ny voam-barotra Liothyronine Sodium (T3) dia singa iray amin'ny iray amin'ireo hormones roa natao tamin'ny taolan'ny tiroida, triiodothyronine. Ampiasaina amin'ny fitsaboana ny olona voan'ny hypothyroid (tsy mamokatra hormones ho an'ny tiroida). Ny hormone amin'ny tiroida dia mampitombo ny metabolism (asa) an'ny sela rehetra ao amin'ny vatana. Ao amin'ny foetus, zaza vao teraka sy zaza, hormones ny tiroida dia mampiroborobo sy mampiroborobo ny vatan'ny olona. Ao amin'ny olon-dehibe, ny hormonina amin'ny tiroida dia manampy amin'ny fihazonana ny asan'ny atidoha, ny fampiasana ny sakafo amin'ny vatany, ary ny mari-pana ao amin'ny vatana. Nampiasaina koa izy io mba hitondrana olana hafa amin'ny tiroida (toy ny karazana goaters sasany, kanseran'ny tiroida). Azo ampiasaina koa izany mba hitsapana ny karazana aretina tiroida.
Roahina Liothyronine Sodium (T3) vovoka (55-06-1) Dosage
Famporisihina ho an'ny Hypothyroidism
Ny dosage natolotra dia ny 25 mcg indray mandeha isan'andro. Ampitomboy ny dosie amin'ny 25 mcg isan'andro isaky ny 1 na 2 herinandro, raha ilaina. Ny dosage mahazatra dia ny 25 mcg amin'ny 75 mcg indray mandeha isan'andro.
Ho an'ireo marary zokiolona na marary miaraka amin'ny aretim-bovoka fototra, manomboka amin'ny CYTOMEL 5 mcg indray mandeha isan-kerinandro ary mitombo amin'ny fatran'ny 5 mcg amin'ny dingana voatondro.
Ny Serum TSH dia tsy azo antoka ny fepetra azo tsaboina amin'ny CYTOMEL amin'ny marary mitaiza amin'ny aretina faharoa sy ny tertiary ary tsy tokony ampiasaina hanaraha-maso fitsaboana. Ampiasao ny habetsary serum T3 mba hanaraha-maso ny mety amin'ny fitsaboana amin'ny marary.
Ireo marary am-bohoka
Ny dosage nomerao dia ny 5 mcg indray mandeha isan'andro, ary ny 5 mcg dia mampitombo ny 3 hatramin'ny andro 4 mandra-pahavitan'ny valiny. Ny zaza vao volana vitsivitsy dia mety mitaky ny 20 mcg indray mandeha isan'andro ho an'ny fikojakojana. Amin'ny 1 taona, dia mila mandefa ny 50 mcg indray mandeha isan'andro. Ambonin'ny 3 taona, dia mety ilaina ny dosage feno olon-dehibe [jereo ny fampiasana azy amin'ny sehatra manokana (8.4)].
Ny zaza vao teraka (0 hatramin'ny 3 volana) amin'ny risika amin'ny tsy fahombiazan'ny kardia:
Eritrereto ny doka kely ambany kokoa amin'ny zaza tsy ampy taona. Ampitomboy ny doka raha ilaina araka ny valin'ny klinika sy ny laboratoara.
Fiahiana zaza amam-behivavy amin'ny atidoha ho amin'ny fihoaram-pefy:
Mba hampihenana ny mety hitrangan'ny aretina amin'ny marary dokotera, atombohy amin'ny iray-fahefatra ny dôma nomena nomena azy, ary hampitombo isaky ny isan-kerinandro amin'ny iray-fahefatra ny dolara feno fanoloana nomena azy mandra-pahatongan'ny dolara feno fantsona nomena.
Hypothyroidism efa misy: Ny tandrok'aretin'ny tiroida amin'ny tiroida dia mety hitombo mandritra ny fitondrana vohoka. Eritrereto ny serum TSH ary maimaimpoana-T4 raha vantany vao voamarina ny bevohoka ary raha kely indrindra, mandritra ny telo volana tratry ny vohoka. Ao amin'ny mararin'ny hypothyroidism voalohany, dia mitazona serum TSH ao anatin'ny refy voafaritra manokana. Ho an'ny mararin'ny serum TSH eo ambonin'ny sehatra ara-pahasalamana mahazatra dia ampitombo ny doroan'ny hormone an'ny tiroida ary manatsara ny TSH isaky ny herinandro 4 mandra-pahatongan'ny doka miorina ary ny serum TSH dia ao anatin'ny faritra voafaritra manokana. Ampiheno ny dosage hormonina hormone ho an'ny lahy sy ny vavy mialoha ny fampakaram-bady raha vantany vao teraka ary mando ny serum TSH ny 4 ka hatramin'ny herinandro 8 herinandro mba hahazoana antoka fa mety ny fitsaboana hormone ny homoid.
Famporisihana ny tsindrona TSH amin'ny fanavakavahana tsiro malemy
Ny dosimin'ny CYTOMEL dia tokony hifantoka amin'ny tsenan'ny TSH ao anatin'ny sehatry ny fitsaboana. Mety mitaky dose avo kokoa izany, arakaraka ny habetsaky ny kinendrin'ny tsindrona TSH.
Famporisihana fanolanana amin'ny fitsapana fanavakavahana ny tiroida
Ny dosie nomerika dia 75 mcg amin'ny 100 mcg isan'andro mandritra ny andro 7, miaraka amin'ny fikirakirana fihenam-bidy mihodina amin'ny radio yvine voafaritra mialoha sy aorian'ny fitantanana ny andro 7 an'ny CYTOMEL. Raha mandeha ara-dalàna ny fiasan'ny tiroida dia hihena be ny fampidirana radioiodine aorian'ny fitsaboana. Ny 50% na fihenan'ny famoahana ny tsindrona dia manondro ny arisin-tsolika mahazatra.
Mifindra avy amin'ny Levothyroxine mankany CYTOMEL
Ny CYTOMEL dia manomboka haingana ny fihetsika sy ny fiantraikany eo amin'ny fikarakarana ny tiroida hafa dia mety hijanona mandritra ny herinandro maromaro taorian'ny nanombohan'ny CYTOMEL fitsaboana. Rehefa mamindra marary iray amin'ny CYTOMEL ianao, dia atsaharo ny fitsaboana levothyroxine ary manomboka CYTOMEL amin'ny dosia ambany. Ampitombo tsikelikely ny dosie CYTOMEL araka ny valin'ny marary.
Fanaraha-maso TSH sy Triiodothyronine (T3)
Manombana ny fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fanombanana ny fitsaboana amin'ny laboratoara sy ny fanombanana ny fitsaboana. Ny porofom-panafaham-pahazotoana momba ny hypothyroïdisma, na dia eo aza ny dingan'ny CYTOMEL, dia mety ho porofon'ny tsy fahampian-tsakafo, ny tsy fahampian-tsakafo, ny fifandraisana amin'ny zava-mahadomelina, na ny fampifandraisana ireo antony ireo.
Amin'ny marary olon-dehibe miaraka amin'ny hypothyroidism voalohany, dia manara-maso ny serum TSH tsindraindray aorian'ny fanombohana ny fitsaboana na fanovana ny doka. Mba hijerena ny valiny avy hatrany amin'ny fitsaboana alohan'ny ahafahan'ny TSH mahazo valiny na tsia ny mari-pahaizana momba ny marary alohan'ny fotoana, dia mety tsara ny fandrefesana ny totalin'ny T3. Ao amin'ny marary amin'ny doka fanoloana azo antoka sy ara-dalàna, dia valio ny valin'ny klinika sy ny biochemika isaky ny 6 hatramin'ny volana 12 ary isaky ny misy fiovana eo amin'ny toetry ny marary.
Ao amin'ny marary dokotera miaraka amin'ny hypothyroidism, dia manombatombana ny filazana ny fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny fandrefesana serum TSH sy T3. Ho an'ireo marary dokotera telo taona no ho miakatra, ny fanaraha-maso ankapobeny dia ny 3 hatramin'ny 12 volana aorin'io, manaraka ny fiorenan'ny doka mandra-pahavitan'ny fitomboana sy ny fahaleovan-tena. Ny tsy fanarahan-danja na ny soatoavina tsy mety dia mety mitaky fanaraha-maso matetika. Manaova fandinihana ara-pahazarana tsy miankina, anisan'izany ny fanombanana ny fampandrosoana, ny fitomboan'ny saina sy ny ara-batana, ary ny fitomboan'ny taolana, ao anatin'ny fotoana fohy.
Raha ny tanjona amin'ny ankapobeny dia ny fampiharana ny serum TSH, ny TSH dia mety tsy hihatra amin'ny marary sasany noho ny aretin'ny hypothyroidism izay mahatonga ny famerenana indray ny valin'ny fitsaboana bitika. Ny tsy fahampian'ny serum TSH hampihenana ny ambany 20 IU isaky ny litera aorian'ny fanombohana ny fitsaboana CYTOMEL dia mety hanondro fa ny zaza dia tsy mahazo fitsaboana ampy. Manaraka ny fanarahan-dalany, ny dingan'ny fanafody, ary ny fomba fitantanana alohan'ny fampitomboana ny dosage an'ny CYTOMEL.
Faharoa sy tertiary Hypothyroidism
Jereo ny serum T3 ary hajao eo amin'ny sehatra mahazatra.
Roahina Liothyronine Sodium (T3) vovoka (55-06-1) Mampiasa
Ny Liothyronine dia ampiasaina mba hikarakarana ny tiroida (hypothyroidism) tsy miasa. Izy io dia manolo na manome hormone ny herin'ny tiroida, izay atao amin'ny tendon-tsiran-dra. Liothyronine dia endrika hormonina avy amin'ny tiroida. Mety hitranga ny hormone an'ny tiroida kely na mitroka ny tiroida amin'ny alalan'ny taratra / fanafody na nesorina amin'ny fandidiana. Manana hormonina ho an'ny fahasalamana ny tiroida. Ho an'ny ankizy, manana fahasamihafan'ny hormonina mampidi-doza dia manampy azy ireo hivoatra sy hianatra ara-dalàna.
Ity fanafody ity koa dia ampiasaina mba hizarana olana hafa amin'ny tiroida (toy ny karazana goaters sasany, kanseran'ny tiroida). Azo ampiasaina koa izany mba hitsapana ny karazana aretina tiroida.
Buy Buy Liothyronine Sodium (T3) avy amin'ny Buyaas.com